၂၀၁၁ လယ်ယာမြေ ဥပဒေကြမ်း ကိုတော့ မကြာသေးခင်ကပဲ လွှတ်တော်မှာ အတည်ပြုခဲ့တာပါ။
ဒီကနေ့ မတ်လ ၂ ရက်နေ့ဟာဆိုရင် ၁၉ ၆၂ ခုနှစ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာတပ်မတော်က အဲဒီအချိန် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအစိုးရကို ဖြုတ်ချပြီး စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူများစုကြီးနဲ့ အဓိက တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအင်အားစုကြီးဖြစ်ကြတဲ့ တောင်သူလယ်သမားနေ့အဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အငြင်းပွားစရာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ကိုခင်မောင်စိုးမင်း က စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီလို အစဉ်အဆက် အငြင်းပွားစရာဖြစ်နေတဲ့ မတ်လ ၂ ရက်နေ့ကို တောင်သူလယ်သမားနေ့အဖြစ် အခုတိုင် ဆက်လက်အသိအမှတ်ပြု ကျင်းပနေကြပေမယ့် တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ အကျိုးကို တကယ်ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါရဲလားဆိုတာ စမ်းစစ်ကြည့်ရပါမယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ကာလတွေမှာ တောင်သူလယ်သမားတွေဟာ မူလစိုက်ပျိုးမြေနဲ့ မသင့်တော်တဲ့ စီမံကိန်းသီးနှံတွေ အဓမ္မစိုက်ခိုင်းတာ၊ တာဝန်ကြေသီးနှံဆိုပြီး ရရှိလာတဲ့ သီးနှံကို မရောင်းမနေရ ဈေးချိုးနှိမ်ဝယ်ယူတာ၊ အမတော်ကြေးချေးငွေတွေကို သီးနှံမပေါ်ခင် ခြိမ်းခြောက်တောင်းတာတွေ ကြုံခဲ့ကြရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၁၉ ၈၈ ကနေ ဒီကနေ့အချိန်အထိလည်း စစ်အစိုးရကာလတွေမှာလည်း မြေသိမ်းယာသိမ်း အတင်းအကြပ်လုပ်တဲ့အတွက် တောင်သူလယ်သမားတွေအတော်များများဟာ မြေမဲ့ယာမဲ့တွေဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်လို့ တောင်သူလယ်သမားအရေးလေ့လာသူတွေက ပြောပါတယ်။ အဲဒီတောင်သူလယ်သမားနေ့ကို ပြောင်းလည်းပေးဖို့အတွက် တောင်သူလယ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ NLD အစိုးရလက်ထက် တောင်သူလယ်သမားရေးရာလွှတ်တော်ကော်မတီကို သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲက မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် AFFM က ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာဇော်ဝင်းအောင် က အခုလိုပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာဇော်ဝင်းအောင် ။. ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီမတ်လ ၂ ရက်နေ့ဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း တို့ အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကို တောင်သူလယ်သမားနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်တာကို ပြောင်းလည်းပေးဖို့အတွက် တင်ပြခဲ့ဘူးပါတယ်။ အဲဒီတုံးက NLD အစိုးရအနေနဲ့ ပြောင်းလည်းပေးဖို့ စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဟာကို ပြောင်းလည်းလိုက်ရင် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ တပ်မတော်နေ့ဆိုတာ တော်လှန်ရေးနေ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေလည် ရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြောင်းဖို့အခက်အခဲရှိမယ်။ တပ်က လုံးဝလက်မခံဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ ပြောင်းလည်းဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
တောင်သူလယ်သမားနေ့ကို သင့်တော်ရာ နေ့ရက်တခုခု သတ်မှတ်ရေးအတွက် တောင်သူလယ်သမားအရေးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အဖွဲ့တချို့က စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုတွေလည်း ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ မကွေးတိုင်းမှာ အခြေစိုက်တဲ့ ကျေးလက်ဖွံဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကျေးလက်မြေအဖွဲ့ လည်းပါဝင်ပါတယ်။ အဖွဲ့ခေါင်ဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဇော်မင်းထိုက် က ဆရာစံ တောသူလယ်သမား သူပုန်ထတဲ့နေ့ကို သတ်မှတ်ဖို့ သူတိုအဖွဲ့တွေကြိုးစားနေကြတယ်လို့ အခုအခါ တိမ်းရှောင်နေရာက ပြောပါတယ်။
ကိုဇော်မင်းထိုက် ။. ။ တောင်သူလယ်သမားနေ့ကို အကြမ်းဖက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကို သတ်မှတ်ထားတာကို သဘောမကျပါဘူး ။ တကယ်တော့ ဒါဟာ တောင်သူလယ်သမားတွေကို အသုံးချတာပါ။ တကယ်တန်းကျေးလက်တောင်သူလယ်သမားတွေကို သူတို့ရှေ့ကနေ. မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ခဲ့တာကတော့ ၁၉ ၃၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ဆရာစံ တောင်သူလယ်သမား တော်လှန်ရေးစတင်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီနေ့ဟာ တောင်သူလယ်သမားနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကို တောင်သူလယ်သမားနေ့အဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရတုံးကလည်း ဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သလို၊ လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာတချို့ကလည်း တခုတ်တရဖော်ပြခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင် တောင်သူလယ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတချို့ကတောင်မှ အခမ်အနားတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒီကနေ့ မတျလ ၂ ရကျနဟေ့ာဆိုရငျ ၁၉ ၆၂ ခုနှဈက ဗိုလျခြုပျကွီးနဝေငျး ဦးဆောငျတဲ့ မွနျမာတပျမတျောက အဲဒီအခြိနျ ပါလီမနျဒီမိုကရစေီအစိုးရကို ဖွုတျခပြွီး စဈအာဏာသိမျးခဲ့တဲ့နဖွေ့ဈပါတယျ။ အဲဒီနကေို့ပဲ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လူမြားစုကွီးနဲ့ အဓိက တိုငျးပွညျစီးပှားရေးအငျအားစုကွီးဖွဈကွတဲ့ တောငျသူလယျသမားနအေ့ဖွဈလညျး သတျမှတျခဲ့ပါတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ အငွငျးပှားစရာတှေ ဖွဈနပေါတယျ။ ဒီအကွောငျး ကိုခငျမောငျစိုးမငျး က စုစညျးတငျပွထားပါတယျ။
အဲဒီလို အစဉျအဆကျ အငွငျးပှားစရာဖွဈနတေဲ့ မတျလ ၂ ရကျနကေို့ တောငျသူလယျသမားနအေ့ဖွဈ အခုတိုငျ ဆကျလကျအသိအမှတျပွု ကငျြးပနကွေပမေယျ့ တောငျသူလယျသမားတှရေဲ့ အကြိုးကို တကယျဖျောဆောငျနိုငျခဲ့ပါရဲလားဆိုတာ စမျးစဈကွညျ့ရပါမယျ။ ဗိုလျခြုပျကွီးနဝေငျး တိုငျးပွညျကို အုပျခြုပျခဲ့တဲ့ ကာလတှမှော တောငျသူလယျသမားတှဟော မူလစိုကျပြိုးမွနေဲ့ မသငျ့တျောတဲ့ စီမံကိနျးသီးနှံတှေ အဓမ်မစိုကျခိုငျးတာ၊ တာဝနျကွသေီးနှံဆိုပွီး ရရှိလာတဲ့ သီးနှံကို မရောငျးမနရေ ဈေးခြိုးနှိမျဝယျယူတာ၊ အမတျောကွေးခြေးငှတှေကေို သီးနှံမပျေါခငျ ခွိမျးခွောကျတောငျးတာတှေ ကွုံခဲ့ကွရပါတယျ။ အဲဒီနောကျ ၁၉ ၈၈ ကနေ ဒီကနအေ့ခြိနျအထိလညျး စဈအစိုးရကာလတှမှောလညျး မွသေိမျးယာသိမျး အတငျးအကွပျလုပျတဲ့အတှကျ တောငျသူလယျသမားတှအေတျောမြားမြားဟာ မွမေဲ့ယာမဲ့တှဖွေဈခဲ့ကွရတယျလို့ တောငျသူလယျသမားအရေးလလေ့ာသူတှကေ ပွောပါတယျ။ အဲဒီတောငျသူလယျသမားနကေို့ ပွောငျးလညျးပေးဖို့အတှကျ တောငျသူလယျသမားအရေး ဆောငျရှကျနတေဲ့အဖှဲ့တခြို့က အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ NLD အစိုးရလကျထကျ တောငျသူလယျသမားရေးရာလှတျတျောကျောမတီကို သှားရောကျဆှေးနှေးခဲ့ကွပါတယျ။ အဲဒီအထဲက မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ တောငျသူလယျသမားသမဂ်ဂအဖှဲ့ခြုပျ AFFM က ဦးဆောငျသူတဦးဖွဈတဲ့ ဒေါကျတာဇျောဝငျးအောငျ က အခုလိုပွောပါတယျ။
ဒေါကျတာဇျောဝငျးအောငျ ။. ။ ကနြျောတို့အနနေဲ့ ဒီမတျလ ၂ ရကျနဟေ့ာဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဗိုလျခြုပျကွီးနဝေငျး တို့ အာဏာသိမျးတဲ့နဖွေ့ဈတယျ။ ဒီအာဏာသိမျးတဲ့နကေို့ တောငျသူလယျသမားနအေ့ဖွဈ သတျမှတျတာကို ပွောငျးလညျးပေးဖို့အတှကျ တငျပွခဲ့ဘူးပါတယျ။ အဲဒီတုံးက NLD အစိုးရအနနေဲ့ ပွောငျးလညျးပေးဖို့ စိတျဆန်ဒရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီဟာကို ပွောငျးလညျးလိုကျရငျ နောကျဆကျတှဲ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ တပျမတျောနဆေို့တာ တျောလှနျရေးနဖွေ့ဈသှားနိုငျတယျဆိုတဲ့အနအေထားတှလေညျ ရှိလာနိုငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ ပွောငျးဖို့အခကျအခဲရှိမယျ။ တပျက လုံးဝလကျမခံဘူး။ သူတို့အနနေဲ့ ပွောငျးလညျးဖို့အခကျအခဲရှိတဲ့အနအေထားမြိုးတှခေဲ့ရပါတယျ။
တောငျသူလယျသမားနကေို့ သငျ့တျောရာ နရေ့ကျတခုခု သတျမှတျရေးအတှကျ တောငျသူလယျသမားအရေးလှုပျရှားနကွေတဲ့အဖှဲ့တခြို့က စညျးရုံးလှုပျရှားမှုတှလေညျး ရှိခဲ့ကွပါတယျ။ အဲဒီအထဲမှာ မကှေးတိုငျးမှာ အခွစေိုကျတဲ့ ကြေးလကျဖှံဖွိုးရေးလုပျငနျးတှကေို လုပျဆောငျနတေဲ့ ကြေးလကျမွအေဖှဲ့ လညျးပါဝငျပါတယျ။ အဖှဲ့ခေါငျဆောငျတဦးဖွဈတဲ့ ကိုဇျောမငျးထိုကျ က ဆရာစံ တောသူလယျသမား သူပုနျထတဲ့နကေို့ သတျမှတျဖို့ သူတိုအဖှဲ့တှကွေိုးစားနကွေတယျလို့ အခုအခါ တိမျးရှောငျနရောက ပွောပါတယျ။
ကိုဇျောမငျးထိုကျ ။. ။ တောငျသူလယျသမားနကေို့ အကွမျးဖကျ သတျမှတျထားတဲ့ စဈအာဏာသိမျးတဲ့နကေို့ သတျမှတျထားတာကို သဘောမကပြါဘူး ။ တကယျတော့ ဒါဟာ တောငျသူလယျသမားတှကေို အသုံးခတြာပါ။ တကယျတနျးကြေးလကျတောငျသူလယျသမားတှကေို သူတို့ရှကေ့နေ. မားမားမတျမတျရပျတညျခဲ့တာကတော့ ၁၉ ၃၀ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ ၂၂ ရကျနမှေ့ာ ဆရာစံ တောငျသူလယျသမား တျောလှနျရေးစတငျတဲ့နဖွေ့ဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အဲဒီနဟေ့ာ တောငျသူလယျသမားနဖွေ့ဈပါတယျ။
စဈအာဏာသိမျးတဲ့နကေို့ တောငျသူလယျသမားနအေ့ဖွငျ့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ အစိုးရတုံးကလညျး ဆကျလကျအသိအမှတျပွုခဲ့သလို၊ လှတျလပျတဲ့မီဒီယာတခြို့ကလညျး တခုတျတရဖျောပွခဲ့တာတှရှေိခဲ့ပါတယျ။ ဒါအပွငျ တောငျသူလယျသမားအရေးဆောငျရှကျနကွေတဲ့ လှတျလပျတဲ့ အဖှဲ့အစညျးတခြို့ကတောငျမှ အခမျအနားတှေ ပွုလုပျခဲ့ကွတာတှရေ့ပါတယျ။
မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေး စက်မှုလယ်ယာ ပြောင်းဖို့ ကိုဗစ်ရံပုံငွေနဲ့ လုပ်နိုင်မလား